Izinzuzo Ezingaba khona Ze-6 ze-Nootropic Sunifiram (DM235) Powder
Izinzuzo Ezingaba khona Ze-Nootropic Sunifiram (DM6) Powder
Uma uzizwa sengathi ufuna ukuthuthukiswa endleleni ubuchopho bakho busebenza ngayo, kufanele uzame ukusebenzisa ama-nootropics. I-Nootropic ivela egameni elithi "NOUS" ne "TROPOS" elisho ubuchopho, okushintshiwe noma okushintshiwe, ngokulandelana. Zaziwa kangcono njengezidakamizwa ezihlakaniphile ezithuthukisa imisebenzi yomuntu yokuqonda. Sekuyiminyaka, ama-nootropics aziwa ukuthi akhulisa ubukhali futhi abe nomthelela omkhulu engqondweni.
Ama-nootropics ayasebenziseka, ikakhulukazi uma ulenga ebhalansi futhi udinga okuthile okuzokwenza ugqame. Osomabhizinisi, abafundi, kanye nabalwi bebelokhu besebenzisa ama-nootropics ukuthola onqenqemeni lwabo. Ngaphandle kwalokho, ama-nootropics kubikwa ukuthi alusizo ezigulini ezinenkinga yokusebenza kwezimoto njengeHuntington's, iParkinson, i-ADHD, nesifo i-Alzheimer.
Enye yama-nootropics anikezela ngemiphumela emihle kakhulu I-Sunifiram, owaziwa nangokuthi yi-DM-235. Isakhiwo sayo sifana naleso se-racetam nootropics kepha sinamandla aphindwe kayinkulungwane kune-piracetam. Impilo ka-Sunifiram ihora elilodwa kuya kwamabili.
Yize kungakaziwa ukuthi iSunifiram ilawula kanjani ukukhiqizwa kwe-acetylcholine, isifundo sezilwane sase-Italy esenziwe sakhombisa ukuthi i-DM235 inomphumela ofanayo we-cholinergic njenge-piracetam.
Indlela yokusebenza ye-Sunifiram vs. Adderall yehluke kakhulu ngoba i-Adderall isebenza ngokuvuselela ukukhishwa kwe-norepinephrine ne-dopamine, yona ekhulisa ukugxila komuntu futhi iholele nasekuvuseleleni ngokomzimba nangokwengqondo.
Enye yezindlela ezilula ongazenza ufune ukuba nesikhathi esihle nomlingani wakho ukuthatha iSunifiram. Lokho kungenxa yokuthi yenza iqhinga ekwenzeni uzizwe sengathi awukwazi ukumelana nomlingani wakho. Ucwaningo olwenziwe kwabesilisa nabesifazane lukhombisile ukuthi enye yezinzuzo zeSunifiram ukuthi lunikeza umphumela owodwa ofana ne-aphrodisiac ekuthatheni.
ISunifiram kubikwe ukuthi inika abasebenzisi bayo umbono ogqamile owenza ukukhanya nobumnyama kuphakame kakhulu. Iphinde yenze imibala ibonakale ngokudlidlizela.
Kwabanye, i-Sunifiram powder (314728-85-3) kubikwa ukuthi kwenza umculo uhlanganyele ngokwengqondo futhi unikeze umuntu ukwaneliseka ngokomzwelo.
Uke uzithola usesenhla, esonakele, e-blue, noma engakhiwa? Uke wazizwa sengathi amandla aphansi amazinga akuhudulela phansi futhi ngisho nenkomishi yekhofi noma isiphuzo samandla kubonakala sengathi akukuphakamisi? Uma ubhekene nalokhu, lapho-ke ungazama umphumela weSunifiram ukugcina ubuvila butholakala.
Abahlanganyeli abasebenzisa iSunifiram babike ukuthi ingeze amandla abo futhi yabanikeza umbono omuhle. Ukuze kube namandla, ubuchopho busebenzisa i-glucose evame ukuhlinzekwa ngamaseli abomvu egazi. Esinye sezidakamizwa esivimba ukugeleza kwe-glucose ezingxenyeni zeseli yiPentobarbital. Umthamo ophansi weSunifiram ukhombise umphumela ofanayo.
Izeluleko eziningi ukuthi ungayithuthukisa kanjani ukugxila kwakho futhi ukuhlushwa kunikezwe kuwebhu yonkana. Ngenkathi ungaqiniseka ukuthi iyiphi phakathi kwabo eletha, ungahle ufune ukwazi ngomphumela we-Sunifiram ngokufanayo.
Enye yezinzuzo ze-Sunifiram ukuthi ithuthukisa kakhulu ukugxila, ukugxila, nokucaca kwengqondo. Kuyasiza futhi ukuthuthukisa ugqozi olubalulekile ekuphatheni ngempumelelo nasekufezeni imisebenzi yengqondo.
Lokho kungenxa yokuthi iSunifiram ithuthukisa ukukhiqizwa kwe-neurotransmitter acetylcholine, indima yayo ukukhuthaza ikhono lokuqonda.
Omunye umsebenzisi weSunifiram ukhuphuke nge-IQ yakhe ngamaphuzu ayishumi nanhlanu ngemuva kokusebenzisa umthamo weSunifiram ka-25mg kane ngesonto izinyanga ezine.
Umphumela we-analgesic obangelwa yi-Sunifiram usiza ukuthi usebenze njenge ukuhlenga ubuhlungu futhi ubuhle obuza nalo ukuthi awuveli nokucindezeleka kanye nomphumela wecala lokukhathazeka ukuthi ezinye izinhlungu ziyanciphisa imbangela.
Ucwaningo olwenziwe kumagundane lukhombisile ukuthi ukwengezelelwa kweSunifiram kubambezele ukusabela kwabo ekushiseni, okukhombisa ukuthi le nootropic inezindawo zokudambisa ubuhlungu. Lo mphumela ubonwe ukuthi usezingeni eliphakeme kumthamo we-Sunifiram ka- (0.01 mg / kg) ngeke umthamo ophakeme, noma ophansi ungasebenzi kahle.
ISunifiram ingenye yama-nootropics anamandla kakhulu emakethe namuhla ngakho-ke kufanele ithathwe ngokuqapha okukhulu. Njengoba ingazange ifundwe kahle, kunzima ukuza nomthamo ofanele. Umuntu kufanele, noma kunjalo, agcine umthamo ophansi, ikakhulukazi uma uwusebenzisa okokuqala.
Kakhulu iza ifomu le-powder, futhi isilinganiso esinconywayo sokuqala se-Sunifiram imvamisa i-3mg kuya ku-4mg ithathwa kathathu ngosuku.
Ngokuvamile, kunezindlela ezimbili ezahlukene ongathatha ngazo i-Sunifiram powder; ungakhetha ukuyixuba namanzi athile noma uthathe kancane. Uma uyibeka ngaphansi kolimi lwakho, uzobona umuzwa omncane wokuthwebula noma wokushosholoza njengalowo owuzwayo uma usufaka iminti yokuphefumula enamandla ngaphansi kolimi lwakho.
Lapho usube ngumsebenzisi we-Sunifiram onolwazi, ungangezelela umthamo ube ngu-5mg noma u-8mg kancane kancane. Lowo ngumthamo omaphakathi okufanele umsebenzisi onolwazi awuthathe. Ngaphambi kokukhulisa isilinganiso sakho, qiniseka ukuthi uthathe i-nootropic isikhathi esingaphezu kwesonto kumithamo ephansi.
Akufanele weqe u-10mg ngosuku ngoba imiphumela yesikhathi eside yeSunifiram isacwaningwa. Futhi ukuyithatha isikhathi eside kakhulu kungakha ukubekezelelana; yingakho, into engcono kakhulu ongayenza ukuqhuba imijikelezo ye-Sunifiram elandelwa ngamakhefu.
Isitaki seSunifiram siyinhlanganisela yeSunifiram kanye nesengezo esisodwa noma eziningi ze-nootropic ezizothathwa ndawonye noma ngokulandelana ukufeza izinzuzo eziningi zokuqonda. Ukuthatha iSunifiram kukodwa kunikeza izinzuzo ezizimele kepha ukuyinamathisela ngenye indlela ye-nootropic kusho ukuthi izinzuzo ziyanda. Kodwa-ke, kufanele uqaphele ngomthamo we-Sunifiram onquma ukuthatha ngokuhlangana namanye ama-nootropics uze wazi ukuthi uzowaphendula kanjani.
Lesi sitaki seSunifiram singenye yezinhlobo ezivame kakhulu zesitaki. Ngemiphumela yokuqonda okuthuthukisiwe, i-Sunifiram ivame ukuhlanganiswa ne-nootropics eyodwa noma ngaphezulu emndenini we-racetam njenge I-Noopept, I-Oxiracetam, ne-Piracetam. Njengoba izinhlanga ziyaziwa ukunciphisa izinga lokuchofoza ebuchosheni, umthombo omuhle we-choline ufana I-Alpha GPC, i-centrophenoxine noma i-CDP choline Kunconywa.
Kuze kube manje, akukho miphumela emibi kakhulu ye-Sunifiram ebikiwe, kodwa kuhle ukukhumbula ukuthi ukuhlolwa kwabantu nokuhlolwa kwemitholampilo akukenziwa. Ucwaningo olwenziwe ezilwaneni lukhombisa ukuthi le nootropic iphephile futhi ibekezeleleke kahle. Kubonisa nokuthi noma kumthamo omkhulu kunalowo obekiwe, akubeki engcupheni yobuthi.
Yonke imiphumela emibi ye-Sunifiram ebikiwe mincane futhi iyahamba cishe ngokushesha. Kubandakanya ukwanda kokushisa komzimba womuntu, ukwanda kwamathe, nokujuluka. Kungadala nezinhlungu zekhanda, kukhulise ukuzwela ekuvuseleleni umsindo nokubonwayo, ukuqina kwamakhala, nokuqwasha.
Le miphumela emibi ye-Sunifiram kubikwa ukuthi iyanda lapho umuntu ethatha isilinganiso se-Sunifiram esiphezulu kakhulu noma esihlanganisa nezinye izithako. Uma uthatha isilinganiso esinconyiwe, akunakwenzeka ukuthi uhlupheke kunoma yimiphi imiphumela emibi ebaluliwe. Noma kunini lapho uzwa sengathi izinhlungu zekhanda zingena ngaphakathi, kufanele uphendukele ku-Alpha GPC.
Njengoba kubonwe ku-athikili, iSunifiram iyinhlobo ye-nootropic ezohlangabezana nezidingo zomzimba wakho nxazonke. Uma kukhulunywa ngokuphepha, ikuthwala imithwalo; ngemuva kwakho konke, akuhambisani okuqhamuka uma udla imishanguzo lokho kuzokukwenza ubone udokotela ngemva kokuyithatha. Into kuphela okumele ukwenze ukukhetha i-nootropic efanele ukuhlanganisa nayo futhi usebenzise inani elifanele ngesikhathi esifanele. Yenza i-oda lakho namuhla futhi ufeze imigomo yakho engokwenyama nangokwengqondo.